Ahoana ny fomba hisafidianana rafitra fanondrahana rano ho an'ny saha samihafa sy ny volan'ny famokarana - magazine "Potato System"
Na ho ela na ho aingana, ny sehatry ny fambolena dia mametraka ny fanontaniana hoe ilaina ny mampita ny sahan-droa miaraka amin'ny rafitry ny fanondrahana. Ny tsena maoderina dia manolotra fitaovana betsaka ho an'ny fanondrahana. Ahoana ny fahazoana io fanampiana io ary misafidy ny safidy azo itokisana sy mahasoa indrindra amin'ny toe-javatra manokana, dia holazainay ato amin'ity lahatsoratra ity.
Fametrahana miparitaka be
Amin'izao fotoana izao, ny milina sisiny boribory dia ao amin'ny fangatahana lehibe indrindra amin'ny tsena Rosiana. Izy ireo dia afaka mameno ny tanimbary 20 ka hatramin'ny 200 ha, miankina amin'ny halavan'ny fametrahana. Ny tombotsoan'ny rafitra boribory tsy misy dikany dia ny fahaleovan-tena: ny milina dia mahavita ny asany tsy misy fanaraha-maso ny mpandraharaha.
Rehefa mieritreritra ny rafi-pandehanana amin'ny tranokala manokana dia misy lafin-javatra manan-danja maro tsy maintsy raisina: ny haben'ny saha, ny endriny, ny topografika ary ny fisian'ireo sakana (faritra ala, tsipika herinaratra). Ny fanodinana ny saha lehibe dia mety mitaky mpandoro maromaro. Miaraka amin'ny fahaiza-manaon'izy ireo izay azo atao, dia azo atao ny manatratra ny fitrandrahana 80-85% amin'ny faritra iray manontolo, izay heverina ho vokatra tsara ho an'ny milina boribory.
Ny fametrahana sehatra (ampahany amin'ny boribory) dia ahafahanao mampiditra ny saha raha tsy hikasika ireo faritra misy sakana. Saingy, raha toa ny milina toy izany dia manarona sehatra iray amin'ny zoro afovoany latsaky ny 180 degre, dia lasa tsy mahasoa ny fampiasana azy.
Ny fijerena manokana dia tokony hokarakaraina amin'ny fifidianana fitaovana ho an'ny fanondrahana ny saha miaraka amin'ny sampan-javatra sarotra. Ny fiovan'ny haavon'ny haavony dia mety hivoatra ilay mpandoto rehefa mandritra ny fandidiana. Ankoatr'izay, tokony ho tsaroana fa rehefa mandalo ny fametrahana amin'ny làlan-kavoana lehibe dia mitombo ny tsindry amin'ny fidirana mankao afovoan'ny fanohanan'ny milina (midika izany fa ny fantsona misy ny fitomboan'ny rindrina ihany no tokony hampiasaina amin'ny sidina voalohany amin'ny fametrahana), ary ny lehibe kokoa ny fahasamihafana, ny "matevina" kokoa. Ny fantsona dia ilaina amin'ny fananganana. Hisy fiantraikany amin'ny toeram-pitaterana fantsom-pomba sy ny fantsom-plastika plastika, ny vidin'ny fitaovana iray manontolo dia hitombo amin'ny fomba mitovy.
Mba hanaterana milina boribory dia ilaina ny manomana ny fotodrafitrasa: mametraha fantsom-plastika plastika, arotsaka tsipika mivaingana eo ambanin'ny piramidin'ny foibe, misafidiana tobin-kaompa ary mamaritra ny loharanon'ny herinaratra.
Raha mifandray amin'ny sehatry ny herinaratra ny herinaratra, afaka apetraka ny biraom-pamokarana herinaratra. Raha tsy izany dia vahaolana iray hafa dia ny fametrahana solika mpamokatra solika sy tobin-tsolika.
Na izany aza, izany rehetra izany dia mihatra amin'ny toeram-pambolena izay mampiditra teknolojia fanondrahana momba ny haidiny amin'ny faritany voalohany. Fa misy tranga matetika eo, raha mamaha ny olan'ny fanoloana ny rafitra efa misy (matetika hatramin'ny andron'ny USSR) ny orinasa iray amin'ny maoderina maro kokoa. Ny fanavaozana ny rafitra dia mandeha ho azy fa kely sisa satria ny orinasa manana ny foto-drafitrasa avy amin'ny fametrahana taloha: voatahiry ny fantsona sy ny pumping station.
Amin'izay fotoana izay ihany koa, ny kalitaon'ny fiasa taloha sy ny fitaovana vaovao dia saika tsy misy kaufaràna. Ny fiara maoderina dia mandrakotra ny faritra iray manontolo. Ny andraikitry ny fanondrahana ny faritany tsy azo tanterahina dia tanteraky ny tafondro rano matanjaka. Ny milina fanondrahana vaovao dia nasiana fehikibo mivalona be dia be ampiasaina amin'ny fanondrahana ny vokatra isan-karazany. Ho an'ny asa mahomby kokoa, ny famafazana boribory dia azo ampiana fitaovana fametrahana ranon-javatra vovoka, onjam-pananana misy etona mpiondana tany.
Masinina mpamatsy baomba. Vahaolana madinidinika kely
Aminà faritra tsy ahafahana mikaroka milina midadasika (ho toy ny fitsipika dia faritra kely misy faritra 20 ka hatramin'ny 50 ha) izy ireo no manoro hevitra ny fametrahana milina fanondrahana misy karazana
Ny zavamaniry iray dia mahomby amin'ny 25-30 ha. Ny fitsipiky ny fiasan'izy ireo dia tsotra: voalohany, noho ny fanampian'ny traktera, tsy voahaja ny coil, manomboka ny tobin-tsompitra, ary ny coil dia manomboka mamerimberina avy hatrany (noho ny rano mandeha amin'ny turbine eo ambany tsindry avy amin'ny toby pump). Mandritra ny famerenan'ny hose dia misy ihany koa ny fampidinana. Ny famolavolana toy izany dia nosedraina nandritra ny am-polony taona maro nanerana izao tontolo izao ary nahavita ny asany araka izay tratrany.
Ny tombony tsy azo resahina amin'ny mason-droa karazana dia misy ny vidiny (raha ampitahaina amin'ny sakeloka), ary koa ny fanamafisana sy ny fanamorana ny fametrahana (izay mamela anao hamindra azy ireo haingana avy amin'ny sehatra iray mankany amin'ny iray hafa).
Fa ireo "coils" dia manana ny drawbacks azy ireo. Hanomboka, farafahakeliny roa na telo dia tsy maintsy mifehy ny fandidiana ny milina misy lasantsy. Ny hafainganam-pandrefesana milina famaky vita amin'ny pandrefesana, raha ampitahaina amin'ny milina midadasika dia mamela ihany koa ny faniriana: ny fanondrahana ny tanimbary 30 hektara amin'ny haben'ny 10 hekitara dia handray ny milina farafaharatsiny XNUMX andro. Amin'izay fotoana izay koa, tsy azo ihodivirana ny kalitaon'ny fampiondrahana, satria somary sarotra ny mifehy ny fitovian'ny rano, ary midika izany fa ny zavamaniry any amin'ny faritra sasany dia tsy mahazo ny hamandoana.
Manome alalana ny milina misy amponga dia ilaina koa ny mametraka fantsom-plastika plastika, fa tsy ho fototra mivaingana kosa, dia mila mampifandray ny "coil" amin'ny fantsona. Ny isan'ireo hydrants dia miankina amin'ny fanitsiana ny saha, amin'ny salanisa, izy ireo dia apetraka isaky ny 50 metatra (raha ampiasaina ny "coil" miaraka amin'ny console) na isaky ny 60 metatra (raha toa ny "coil" raha tsy misy console). Solika famatsiana herinaratra na diesel dia azo ampiasaina amin'ny herinaratra amin'ny rano amin'ny rano.
Raha tokony ho fantsona plastika dia manolo-kevitra ny mpanjifanay mampiasa aluminium haingana izahay. Noho ny famolavolana azy io dia mety hotsorina mora foana ary alefa mankany amin'ny fizarana vaovao raha ilaina izany.
Ho fehiny, te-hanasongadina aho fa ny karazana masinina tsirairay naseho dia mahomby amin'ny toe-javatra sasany, manana ny pros sy cons cons izy ary tena ilaina amin'ny tsena. Ary ny manam-pahaizana hanampy anao amin'ny safidy.
Vondronà orinasa "Agrotrade"
Tags: 2020 No. 2mpandrafitra baombafametrahana boribory miorinafitarihan-drano
Ny mpahay siansa dia nanambara ny tsiambaratelon'ny loko voloky ny ovy
Amin'ny taona 2018, mikasa ny hamorona afovoan-javamaniry masomboly ao Dagestan izy ireo